PunchTab: Abaalmarinta Bulshada iyo Daacad u ah Goob kasta | Martech Zone
PunchTab: Abaalmarinta Bulshada iyo Daacadnimada Goob kasta
Jimcaha, Sebtember 2, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Dhowr usbuuc ka hor ayaan tijaabiyey madal cusub oo la yiraahdo PunchTab. Laga soo bilaabo barta PunchTab:
PunchTab waa barxadda ugu horraysa ee adduunka ugu daacadsan ee u oggolaanaysa milkiileyaasha websaydhka (oo ay ku jiraan kuwa wax qora), kuwa sameeya dalabyada iyo astaamaha si ay ugu abuuraan barnaamij daacadnimo bulsho iyo moobiil awood u leh bilaash daqiiqo. Waxaan haynaa laba shey oo caan ah maanta, oo labaduba aan wax kharash ah la isticmaalin:
Barnaamij daacad ah oo socda oo aad u adeegsan karto inaad ku dhiirrigeliso isticmaaleyaashaada inay soo booqdaan maalin kasta, la wadaag macluumaadkaaga shabakadaha bulshada oo aad uga tagto faallooyinka (waxaan sidoo kale leenahay xirmo horumarineed oo kuu oggolaanaya inaad ku darto siyaabo qaas ah oo aad dhibco ku kasban karto). Isticmaalayaasha waxay ku kasban doonaan dhibco maalin kasta ficilladooda waxayna ku guuleysan karaan abaalmarino ka mid ah liistada daacadnimada la beddeli karo markay kasbadaan dhibco ku filan.
Fidelid hal mar oo xayeysiis ah oo dhiirrigelisa isticmaaleyaashaada inay ku faafiyaan ereyga ku saabsan bartaada iyada oo lagu beddelayo gelitaanka abaalmarinta abaalmarinta.
Waxyaabaha cajiibka ah ee ku saabsan barxadda ayaa ah inay labadaba fudud tahay in la isticmaalo iyo is-adeegsi. Punchtab waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inuu si fudud u dejiyo nidaam abaalmarin ah oo ku saabsan isdhexgal kasta oo lala yeesho astaanta… laga bilaabo Retweets, illaa Facebook Likes, illaa Diiwaangelinta Email. PunchTab waxay ku shaqeysay in ka badan 1,000 wax bixin 3-dii bilood ee la soo dhaafay - oo ay ku jiraan mid ay bixiyeen Tim Ferris, MahaloGaming iyo CrunchGear. Ka ugu weyni wuxuu ahaa Vyrso.com, oo helay in ka badan 100,000 oo gelitaan iyo 9,500 taageerayaal Facebook ah muddo 30 maalmood ah!
Ganacsatada websaydhka ah iyo milkiileyaasha ganacsatadu way ogyihiin in inta badan dakhliyada soo socda ay ku qasbanaan doonaan ku celcelin hawlgal, macaamil ganacsi, iyo talooyin macaamiisha aad horay ugu guuleysatay. PunchTab waxay bixisaa hal madal oo si buuxda macaamiishan ugu mashquulisa goob kasta oo la taabto: khadka tooska ah, bulshada, qadka, moobiilka iyo e-ganacsiga. Agaasimaha Guud iyo Aasaasaha Ranjith Kumaran
Natiijooyinka waa kuwo cajiib ah:
Waxaa jira in ka badan 1600 goobood oo ka socda barnaamijyo daacadnimo ah iyagoo adeegsanaya PunchTab
Bogagani waxay siiyaan PunchTab inay gaaraan macaamiisha 6MM (macnaha dadka gaarka ah ee 6MM waxay arkeen barnaamijyo daacadnimo oo ay ku shaqeyso PunchTab)
Meelo waaweyn oo ka tirsan shabakadda PunchTab waxay arkayaan kor u qaadista ka-noqoshada ee 50% -100% oo ka socda “xubnaha”Celcelis ahaan isticmaalaha. Tani, dabcan, waxaa ku jira qaar ka mid ah xulashada is-xulashada maaddaama isticmaaleyaasha firfircoon ay u badan tahay inay xubno ka noqdaan. Qaybta muhiimka ahi waxay tahay in hadda goobahu aqoonsadeen oo la siiyay qalabkan saamaynta ku leh inay dad badan keenaan xafladda iyada oo loo marayo PunchTab.
Goobaha sidoo kale waxay u arkaan inta udhaxeysa 15% ilaa 35% kor u qaadista howlaha bulshada (qoraallada darbiga, wadaagista, tweeting)
Isku-darka Wadahadalka boggaaga 5 Daqiiqo
Xaqiiqdii waxay u egtahay mid xiiso leh, maxaa yeelay waxay noqon doontaa mid la qabatimo qabashada hawl yar (tweet, jeclaan ama + 1) si aad u hesho abaalmarino qaar.
Waxaan ku rakibay degelkeyga, oo waxaan ku soo daray qashinka toolbaaska. Sababo jira awgood, facebook twitter-ka iyo badhannada google hadda ma bixiyaan abaalmarin, akhristayaashayduna waxay helayaan dhibco kaliya booqashada iyo faallooyinka. Waxaan u soo sheegay PunchTab dhibaatada jirta waxayna u sheegeen inay eegi doonaan.
Sikastaba, kani waa fure-furan layaableh kaas oo dadka ku dhiiri gelin kara dhiirigelinta maqaallada, iyo abaalmarinno. Iyo boggaga / boggaga internetka, tani waa waxa ugu fiican!
Jul 10, 2012 markay tahay 8:38 PM
Qalabka ma uusan ka muuqan boggeyga facebook